बार्सिलोनाले विकल्प खोजे स्वारेजलाई आपत्ती नहुने ! | Hamro Khelkud
बार्सिलोनाले विकल्प खोजे स्वारेजलाई आपत्ती नहुने !
एजेन्सी– लुइस स्वारेजको ठाँउमा अर्को खेलाडीका विषयमा बार्सिलोनाले अघि कुनै विकल्प सोचिसकेको छैन । तर, स्वारेजकै भनाई भने अलि फरक छ । यदि क्लबले अर्को कोहि खेलाडीलाई ल्याउँछ भने पनि त्यसमा आफुलाई आपत्ती नहुने उनले बताएका छन् । उरुग्वेली स्टार ३२ वर्षका भइसकेका छन् । फुटबलमा यो उमेर एकदम युवा अवस्था होइन ।
‘यस्तो समय आउँछ । त्यो उमेरमा मैले चाहेर पनि बार्सिलोनामा आवश्यक पर्ने जस्तो स्तरको प्रदर्शन दिन सक्दिन’, स्वारजेले भने, ‘तर जति बेला सम्म मसँग सामाथ्र्य हुन्छ त्यति बेला नै क्लबले प्रतिस्पर्धा बढाउन सके झनै राम्रो । यदि क्लबले नयाँ फरवार्डका बारेमा सोचेको छ भने त्यसमा मैले आपत्ती मान्नु पर्ने केहि छैन ।’
उनले व्यवासायिक फुटबलमा नयाँ खेलाडी आउने विषयलाई समान्य रुपमा लिएका छन् । ‘फुटबलको वास्ताविकता नै यहि हो । मेरो लागि पनि यो राम्रो हो । समयले हरेकको विकल्प खोज्छ,’ लिभरपुलका पूर्व स्टारले भने, ‘जति प्रतिस्पर्धा भयो , क्लबका लागि पनि त्यत्तिकै राम्रो हो । ‘
स्वारेजले पछिल्लो पाँच वर्ष क्याप नोउमा गरेको अनुभवका बारेमा भनेका छन्, ‘यहाँ पाँच वर्ष उस्तै खाले दबाब रह्यो । मैले ती सबै चुनौतिलाई स्विकार गरे । यो जस्तो क्लबमा सधै आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्नु सहज छैन । यहाँ हरेक तीन दिनमा परिक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ आराम छैन र खराब दिनका लागि माफी दिइन्न ।’